Wzọ isii iji bulie Social Media maka Azụmaahịa Omume | Martech Zone
Ka m na-esonye na soshal midia, ana m ahụta ihe m na-amaghị na ndị ọyị, ndị mmekọ m ma ọ bụ ndị ahịa m na-aga. M na-aga ihe omume karịa mgbe ọ bụla m nwere n'oge gara aga ekele maka Facebook Ihe, Nkwupụta nzute, na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ m sonyeere. Ihe omuma ihe omuma a na-ele anya otu ị gha esi jiri mgbasa ozi ndi mmadu maka nkwalite ihe omume; chọpụta ihe bụ igodo maka mmemme hashtag dị irè ma nweta ndụmọdụ n'aka ndị ọkachamara na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ndị a bụ ụzọ 6 iji kpalite mgbasa ozi mmekọrịta iji zụọ ihe omume gị ọzọ!
Mepụta Facebook Omume ịkọrọ na ịkwalite mmemme gị.
Hashtag nyocha ma mepụta hashtag pụrụ iche maka mmemme gị.
Zụlite ma kesaa tweet edere tupu ndị mmadụ kesaa ma kwalite na Twitter. Jiri ngwá ọrụ dị ka Pịa iji tweet ime ka odi mfe.
Mepụta ọdịnaya gaa n'ahịa ma kwalite mmemme gị online.
Kekọrịta na vidiyo vidiyo na foto ndị e mere na mmemme ahụ. Ọ bụrụ n’ị mee nke a n’oge, ndị enyi ga - esonye ndị enyi ha abịarula.
Ekekọrịta isi ihe nke ihe omume na Instagram na vine na ụfọdụ kediegwu.
Infographic nke mepụtara Ogige Mgbakọ Lakeshore.
Tags: pịa tweetihe omume hashtagmmemme ahiaihe omume fotommemme nkwaliteomume mmadụ mgbasa oziihe omume vidiyoomume facebookinstagrammeetupakwalite omumemgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozitweetvinevidio vidio